Self ukucaca HGY28 HGY32
Imodi drive: wokubacindezela ngokugcwele
Boom Sakhiwo: 28-3M, 32-3M / 4M
Pipeline ubukhulu: 125mm
Uma usebenzisa, it is ancred kwisitezi nge izimbobo initiallly okulungiselelwe. Uma-ke kuyadingeka ukuba usukume crane umbhoshongo kuyadingeka ukuthi siphakamise ngokufakwa boom esitezi ephakeme olandelayo ngokuba anchored.one isikhathi ekhuphuka kungaba ukuhlangabezana nezidingo ngokufakwa ukhonkolo sesibili.
Umklamo Compact, operation lula, ukuphepha onokwethenjelwa futhi ofanele ukwakhiwa esakhiweni esiphakeme
Uhlobo Floor Fixed Self ukucaca
ovundlile Reach 28M 32M 32M
Elevation engela 0-85 ° 0-85 ° 0-90 °
amandla 11 22 22
Boom Vula Indlela 3R 3R 4R
Ukuphela RubberHose 3m
Ububanzi Inner Φ125mm
isisindo 18.5t 19.5t 19.6t
nge counterweight Ayikho counterweight
ukupakisha 40HQ * 2 40HQ * 2 40HQ * 2
I arced boom isakhiwo elungiselelwe ngokusebenzisa CPU design. I boom yokutholwa ephezulu amandla steel plate for ukukhiqizwa inqubo ngokwesayensi. Zibonisa eyigeza, rigidity aphakeme futhi ufake umfutho owengeziwe, ukuqinisekisa izinga esihle futhi eqotho.
B. umfutholuketshezi uhlelo
Imikhiqizo G chungechunge yokutholwa edumile emhlabeni eJalimane Rexroth uwoyela futha, valve ezilinganiselwe
(nge yokusebenza isibambo) nokulinganisela INGAPHANDLE ukuchichima yesibili, ngenkathi uC no-E uchungechunge
imikhiqizo yokutholwa eJalimane Rexroth Solenoid ohlangothini ukulawula valve futhi ibhalansi umphini
nge ukuchichima yesibili. Kuye ngempumelelo bagwema umonakalo bezikhali boom
okungase kubangelwe phezu isivinini ukunyakaza lapho boom lehla, futhi kungazelelwe
nesanda ingcindezi uwoyela isilinda ngaphansi amabutho angaphandle, ngaleyo ndlela ukuthembeka boom
C.Inner umfutholuketshezi Oil Tank
Inner ithangi uwoyela wokubacindezela ihumusha isakhiwo compact futhi swivel khulula. Inikeza enkulu
esilungele ukufakwa, dismounting nokugcinwa, ezonikeza isiqiniseko eside inkonzo
nokuphila kanye nokusebenza kakhulu.
Ngenxa unxande Uhlaka isakhiwo, isikhungo ekhuphuka nezimo, futhi okuthembekile elula
E. Mechanism Slewing futhi Reducer
Slewing imikhiqizo reducer yokutholwa eyenziwe emhlabeni brand odumile Italy Comer, nge
a torsion okukhulu. Kokuba ihambisana kuhlanganiswe slewing ibhalansi umphini eyenziwe
eJalimane Hawei, sokufeza lisebenza ngokushelela nangokufanele ukusebenza onokwethenjelwa futhi uzinzile.
F.Wireless Isilawuli Remote
Imikhiqizo ye-G chungechunge zamukele umkhakha-okukhethekile Analogue engenantambo isilawuli kude eyenziwe
eJalimane Hetronic, kanye valve ezilinganiselwe eyenziwe eJalimane Rexroth, kwenza ukunyakaza abushelelezi, umthelela wokubacindezela elinganiselwe, futhi ukusebenza onokwethenjelwa. Ngaphandle kwalokho,
okuwenza abe nokwenzeka ukulawulwa isivinini stepless futhi boom multi futhi slewing nokuxhumana, okuyinto sithuthukiswe emsebenzini ukuqeqesheka kakhulu.
■ uC no-E imikhiqizo series zamukele umkhakha-okukhethekile Analogue engenantambo isilawuli kude eyenziwe Taiwan TELECRANE, okuyinto lula futhi elula ukusebenza, kakhulu ukumelana
ukuphazamiseka nokunokwethenjelwa ekusebenzeni.
■ Uchungechunge ngayinye ahambisana ne yezintambo isilawuli kude ukuze isetshenziswe isidingo.
I kagesi uhlelo lokulawula yokutholwa izwe brand odumile izingxenye kagesi, ezifana
njengoba Japanese Omron nesiFulentshi Schneider. I multi isivikelo ngokuzenzakalelako Umiswe
uhlelo lokulawula, ukuze ugweme misoperation futhi ukuqinisekisa nokwethenjelwa wesistimu.
Ikholomu senziwa ephezulu amandla steel plate isesimweni sikwele, ngokubukeka enhle,
rigidness futhi ufake umfutho owengeziwe, kanye enokwethenjelwa.
Previous: Elimile ukhonkolo ngokufakwa boom HGY28
Okulandelayo: Mobile placing boom HGY15
Elimile ukhonkolo ngokufakwa boom